दलान नेपाल : अब हामीले पनि प्रचण्डलाई उपयोग गर्न सक्नु पर्छ - उपेन्द्र यादव
मधेशी मोर्चामा पनि त एकमत छैन नि ?
- होईन, अहिले सम्म मधेशी मोर्चा ३० दलीय गठवन्भन भित्र सहकार्यको अवस्थामा थियो । र जब ३० दलीय गठवन्धनसंग सहकार्यको कुरा रहदैन, त्यस पछि हामी आफनो छुटै वाटो लिन्छौ नि ।
तर मधेशी मोर्चाकै एक घटक विजय गच्छदार त प्रचण्ड संग पुरै हौसिएका छन नि ?
- को को संग छन, त्यो हाम्रो लागी सरोकार कै विषय होईन । हाम्रो वाटोमा को को हुन्छ, त्यो सवै हामी मिलेर अघि वढछौ ।
संघियताको सन्दर्भमा अहिले मधेशमा ३ प्रदेशमा बनाउने गरी कुराकानी मुख्य दलहरु विच चलीरहेको आईरहेको छ, जसमा एमाओवादी र गच्छदार समेत सामेल छ भन्छन नि ?
- त्यो दिवास्वप्नमा रमाउनेहरुलाईै अहिले नै म केही भन्दिन । तर एएटा कुरा स्पष्ट छ । विगतको सम्झौ विपरित मधेशलाई खण्ड अण्डमा विभाजित गर्न हामीले दिदैन र त्यो कुनै पनि हालतमा स्विकार्यमा हुने छैन ।
अन्तमा, तपाई र प्रचण्ड विचको सम्बन्ध पटक पटक विवादमा तानिन्छ, कुरो के हो ?
- होईन, प्रचण्डजी आजको मितीमा पनि मेरो नजरमा क्रान्तिकारी नै हुनुहुन्छ । तर उहांले एैनमौकामा आएर हामीलाई धोका दिनु हुन्छ । त्यसैले वेला वेलामा यो देखिएको हो । वा भनौ उहांले अरुलाई प्रयोग गर्न जान्न्ु हुन्छ कि । तर त्यसले उहालाई पनि समस्यामै पार्ने गरेको म देख्छू । अब उहांले सक्नु भयो भने हामीलाई अझै प्रयोग गर्न सक्नु हुन्छ । वा अब हामीले उहांलाई प्रयोग गर्न सक्नु पर्छ ।